Halbeegyada Waxqabadka Heerkulka Saxarada Qallajinta Qallajinta
Maaddaama mid ka mid ah qalabka baaritaanka ee sida caadiga ah loo adeegsado shaybaarrada cilmiga noolaha, foornada qallajinta qallalka saxda ah waa mid fudud oo si ballaaran loo adeegsado, Sidaas darteed xulashadu aad ayey muhiim u tahay. Foornada qallajinta saxda ah waa nooc ka mid ah foornada warshadaha yaryar, sidoo kale waa tan ugu fudud ee dubista heerkulka joogtada ah. Te ...
Sidee loo doortaa Qolka Heerkulka iyo Uumiga Joogtada ah (QAYBTA Ⅲ)?
Toddobaadkii hore, waxaan wadaagnay sida loo doorto Cabbirka iyo Habka Imtixaanka ee Qolka Heerkulka iyo Uumiga Joogtada ah, Maanta waxaan jeclaan lahayn inaan ka wada hadalno qaybta xigta: Sida loo doorto Heerkulka Heerkiisa. Qeybta Ⅲ: Sidee loo doortaa Heerkulka Heerkulka ee heerkulka joogtada ah iyo qoyaanka? Maalmahan ...
Sidee loo doortaa Qolka Heerkulka iyo Uumiga Joogtada ah (QAYBTA ~ Ⅱ)?
Si macaamiisha looga dhigo inay doortaan heerkulka iyo qoyaanka joogtada ah si macquul ah oo sax ah, maanta waxaan la wadaagi doonnaa sida loo doorto Cabbirka iyo Habka Xakamaynta. Qaybta Ⅰ: Sidee loo doortaa Cabbirka qolka joogtada ah ee heerkulka iyo qoyaanka? Marka sheyga la tijaabiyay (qaybaha ...
Tallaalka, Rajada adduunka
In ka badan hal sano ayaa laga joogaa markii uu faafay faafa, dhaqaalaha iyo nolosha dadka adduunka oo dhan si aad ah ayey u saameysay. Gaar ahaan, tirada kiisaska la xaqiijiyay adduunka oo dhan waxay dhaafeen 100 milyan. Caafimaadka bini'aadamka ayaa si halis ah loogu hanjabay tallaalna ...
Foornada faakiyuumka lagu qalajiyo ee ay soo saarto DRICK waxay yareyneysaa halistaan ​​inta lagu gudajiro howsha qalajinta qolka qalajinta faakiyuumka Ujeedada qaabkan ayaa ah in si tartiib ah loo qalajiyo alaabada heerka-sare ah oo ay ku jiraan biyo ama dareeraha iyadoo aan la bedelin waxqabadkooda. qalajinta ...
Waqtigan xaadirka ah, xaaladaha faafa ee meelo kala duwan oo adduunka ah wali si buuxda looma xakamayn, waddamo iyo gobollo kala duwan iyo waaxaha caafimaadka iyo caafimaadka ee la xiriira iyo waaxaha baaritaanka ayaa sidoo kale qaadanaya istiraatiijiyado jawaab celin firfircoon.